Caafimaad qabi | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / Caafimaad qabi
Adigaaga yimi Iswiidhan adigoo bilaa waalid ama dadka haysta mas'uuliyadaada sharci waxaad leedahay xuquuq la mid ah sida dhamaan caruurta iyo dhalinyarada kale ee ka yar 18 sano ee jooga Iswiidhan. Waxaad xaq u leedahay inaad hesho caawimaad iyo daryeel caafimaad marka aad u baahato. Waxaad xaq u leedahay inaad dareento wanaag.
Iswiidhan waxaa ka jira qolyo badan oo ka shaqeeya sidii aad adigu u qanacsanaan lahayd una dareento wanaag. Waxaa ka mid ah adeega arrimaha bulshada, wakiilkaaga caruurta iyo shaqaalaha iskoolka ama dhanka daryeelka bukaanka. Iyaga ayaad uga sheegi kartaa haddii aad xanuusanayso ama haddii aad wax u baahantahay. Iyagu waa inay hubsadaan inaad hesho caawimaada aad u baahantahay si aad dareento wanaag.
Waxaad xaq u leedahay daryeelka bukaanka iyo daryeelka ilkaha haddii aad u baahato. Daryeelku badanaaba waa bilaa kharash haddii aad ka yartahay 18 sano. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo daryeel gudaha Iswiidhan.
Halkan ayaad ka helaysaa caawimaada inaad hesho daryeelka saxda ah.
Dhamaan dadka magan-gelyo ka raadsaday Iswiidhan waxaa lagu casuumaa baaritaan caafimaad oo bilaash ah.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan baaritaanka caafimaadka.
Caafimaadka maskax ahaan
Caafimaadka maskax ahaan wuxuu ku saabsanyahay sida aynu dareemayno shucuur ahaan. Mararka qaarkood wax badan ayaa laga fikirayaa oo markaasi waxaa loo baahan karaa taageero. Adigaaga yimi dal cusub laga yaabee inaad ka fikirayso wax adag oo ku soo maray. Waxaa dhici karta inaad ka wel-welsantahay waxa ku dhici doona qoyskaaga ama sida mustaqbalku noqon doono. Mararka qaarkood laga yaabee inaad niyad ahaan xanuusanayso adigoo aan run ahaantii ogayn sababta.
Mararka qaarkood waxaa suurtagal ah inaad adigu laf ahaantaada samayso waxyaabo aad wanaag ku dareento. Waxaa jirta rugta qaabilaada dhalinyarada lagana helo intarnatka oo luqado badan ah taas oo lagu magacaabo Youmo.se. Halkaas waxaad ka helaysaa talooyinka waxa aad adigu samayn karto si aad u dareento farxad iyo deganaansho. Dhanka youmo.se waxaad ka daawan kartaa filimo kana akhrisan kartaa dheeraad ku saabsan waxa aad samayn karto haddii adiga ama qof kale xanuusanayo cilmi nafsi ahaan. Halkaas waxaad xitaa ka helaysaa jawaabta su'aalo badan kuna saabsan tusaale ahaan jirkaaga, jacaylka iyo galmada.
Filim ka yimi Yuomo.se: Miyay ku soo mareen wax baqdin badan ku galiyey?
Filimadan waxaa lagu helayaa Iswiidhish, Carabi, Daari, Ingiriisi, Soomaali iyo Tigrinya.
Dheeraad ku saabsan in la xanuusanayo nafsad ahaan ka akhri youmo.se
Haddii aad wakhti dheer xanuusanaysay ama aad u xanuusanayso waa inaad raadsataa caawimaad. Waxaad xitaa keli ahaantaa la xiriiri kartaa daryeelka caafimaadka ama laga yaabee inaad caawimaad ka hesho wakiilkaaga caruurta ama shaqaalaha jooga hoygaaga.
Haddii aad dhigato iskool waxaad caawimaad ka heli kartaa la-taliye iskool, kalkaaliso caafimaad ama shaqaalaha kooxda caafimaadka ardayda. Waxaad xitaa la xiriiri kartaa tusaale ahaan rugta caafimaadka, rugta qaabilaada dhalinyarada ama Isbitaalka cilmi nafsiga caruurta iyo dhalinyarada (Bup).
Dhamaan dadka iskoolka ka dhigta Iswiidhan waxay heli karaan caawimaad lagu magacaabo caafimaadka ardayda. Tani micnaheedu waa inaad la kulmayso kalkaaliso caafimaad ama dhakhtarka iskoolka ee jooga iskoolkaaga. Waxaa kale oo jira la taliye ama dhakhtarka cilmi nafsiga jooga iskoolkaaga oo aad la hadli karto haddii aad murugeysantahay oo xanuusanayso nafsiyan. Dhamaan shaqaalaha ka shaqeeya kooxda caafimaadka ardayda waxaa waajib ku ah xog qarinta shaqada. Tani micnaheedu waa in iyaga aan loo oggolayn inay waxyaabo adiga kugu saabsan uga sheekeeyaan
dad kale iyagoo adigu aanad oggolaan tani.
Waxaad la xiriiri kartaa rugta caafimaadka haddii aad xanuusanayso nafsiyan. Shaqaalahan ayaa kaa caawin doona inaad hesho daryeel sax ah.
Dhanka Hagida daryeelka ee 1177 Vårdgudien waxaad ka helaysaa rugta qaabilaada Bup ee kuugu dhow
Haddii aad heshay sharciga deganaansho oo ka diiwaan-gashantahay degmo waxaad xaq u leedahay taageero dheeraad ah.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan xuquuqdaada xilliga wakhtiga magan-gelyo doonka.
Khamriga, daroogada, maadooyinka jirka, tobaakada iyo khamaarka
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan khamriga, daroogada, dawooyinka jirka dhisa, tobaakada iyo khamaarka.